किन हुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागमा विचौलियाको बिगबिगी ? - TV Annapurna
April 29, 2018 May 5, 2018 TV-Annapurna
वैदेशिक रोजगार विभागमा विचौलियाको बिगबिगी हुनुको पछाडिको ठुलो रहस्य पर्दाफास भएको छ । जसको प्रमुख कारण त्यहाँँ बैंकिङ सेवा प्रदायक बैक तथा वित्तिय सस्थाको उपस्थिति नहुनु देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु अघि सेवाग्राहीले विभागबाट स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको हो । त्यसको लागि बुझाउनु पर्ने राजश्व बैंक मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था विभागले गरेको छ । तर यही शुल्क बुझाउन वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल भन्दा केही टाढा कालिमाटी या त्यो भन्दा टाढा या त कलंकी या न्युरोड पुग्नु पर्ने हुन्छ । जसको लागि थप समय खर्चनु पर्ने हुन्छ भने अन्य सबै प्रक्रिया पुरा गर्न थप अर्को दिन सम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ । यस कार्यालयमा हरेक दिन हजारौँ सेवाग्राहीहरु श्रम स्वीकृती लिन पुग्ने गर्छन । तर सबै जसो सेवा ग्राहीहरु सेवा लिन पुगेपनि अवश्य ती विचौलियाको शरण लिनु पर्ने बाध्याता रहिआएको छ ।
यहाँ आउने सबै सेवाग्राहीहरुलाई सेवा छिटो छरितो प्राप्त गर्ने चाहना हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर वैदेशिक रोजगार विभागले प्रदान गर्ने सेवामा सहज बनाउन सामान्य भन्दा सामान्य कुरामा चासो नदिएका कारण यस्तो अस्त व्यस्त भएको हो । छिटो गर्ने नाममा विचौलियाहरु सलबलाउने गरेको तथ्य उजागर भएको हो । सेवाग्राहीलाई एकै ठाँउबाट विना झण्झट छिटो छरितो सेवा उपलब्ध हुने अवस्था भए विचौलियाहरुको विगविगी नहुने सर्वसाधारणको ठम्याईँ रहेको छ ।
श्रम स्वीकृतिको लागि टाढा टाढाबाट आउनुपर्छ तर काठमाण्डौ बाहिरबाट आउनेहरुका लागि एकैदिनमा श्रम लिन नभ्याउने भएपछि बाध्य भएर विचौलियाकै शरणमा पर्नु परेको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।सेवाग्राही हरुले भने एक दिन काठमाडौँ बस्दा थप धेरै खर्चहुने हुँदा बरु विचौलियालाई नै काम गर्न लगाए धरै खर्च हुनबाट जोगिने भएकाले यसो गरेको उनीहरुले बताउँछन ।
यसरी सेवा लिर्इरहेका सेवाग्राहीले सेवा त पाउँछन तर सरकारले भने भन्दा बढी रकम तिरेर आफ्नो काम गरिरहेका छन् । यसो २ बर्ष सम्म १८ बर्ष देखि ३५ बर्ष सम्म मानिसले बिमा शूल्क वापत तीन हजार ५ सय २४ रुपैया र राजस्व वापत एक हजार ५ सय रुपैया, तिर्नुपर्ने हुन्छ । भने ३६ बर्ष देखि ५० बर्ष सम्मका लागी चार हजार नौ सय ३० रुपैयाँ बिमा शुल्क एक हजार ५ सय सरकारी राजस्व , ५१ बर्ष देखि ४० बर्ष सम्मका लागी सात हजार दुई सय पचास बिमा शुल्क र सरकारलाई राजस्व बापत १ हजार ५ सय बुझाउनुपर्ने व्यबस्था छ । तर त्यसैको आड लिई यति बेला बिचौलियाहरु ठुलौ रकम लिर्इरहको खुलेका छ ।
यसरी सेवा लिन पुगेका मध्येका ३० बर्षीय कुमारजंग कार्कीले भने सबै काम गरिदिन्छु भनि ८ हजार दिए,तर के कति काममा खर्च भयो भन्ने प्रश्न गर्दा बिमा शुल्क ,काल्याणकारी कोष, अनलाइन फम र पोलिसीमा खर्च भएको भन्ने सुनाएको बताएका छन ।
यिनी जस्तै अर्का सन्त बहादुर क्षेत्री साउदी जान भनि श्रम बनाउन पुगे तर उनी पनि तिनै बिचौलीय संगठनको शरणमा पुगे । उनले भन्छन् बिमा वापत तिन हजार नौ सय २४ रुपैयाँ १ हजार ५ सय कल्याणकारी कोष , अनलाइन फम वापत ३ सय ५० गरी ८ हजार बुझाएको बताएका छन् । तर हिसाबमा ५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ हुन्छ । यसरी थाहा हुन्छ कि ५ हजार ७ सयमा हुने कामका लागि ८ हजार भन्दा बढी लिएपछि बाँकी पैसा के कुरामा गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यति सम्म कि के के कुरामा कति लाग्यो भनेर सेवा ग्राहीले प्रश्न गर्दा त्यस बाहेक अन्य पोलिसीमा खर्च भएको भन्ने गरेको सेवा ग्राहीले गुनासो गरेका छन । सेवा ग्राहिले भने , बिल भरपाई माग्दा बिमा र राजस्वको बाहेक अरु कुनैको बिल भरपाईहरु आफुहरुलाई नदिएको गुनासो गरेका छन ।यस्तै सेवाग्राहीको गुनासो लिएर निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्द्रदेव पाण्डेसगँ कुरा गर्दा बिमा शुल्क कल्याणकारी कोष र अनलाइन फमको शूल्क बाहेकको अन्य रकम लिन नपाउने बताए । तर उनले भने जस्तो बाहिर सेवा लिन बसिरहेका ग्राहीहरुको गुनासो फरक छ ।
यसरी मौलाइरहेको बौलियाको जालो तोड्न किन ढिलाई?
प्रशासन बाहिर यस्ता खालका कामहरु भइरहेका छन् किन प्रशासन मौन भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले भने कुनै सेवा ग्राहिले हामी ठगियौ भन्ने उजुरी दिनुभएको छैन । यदि त्यस्तो उजुरी लिखित आयो भने हामीले प्रहरीको साहयता लिएर कारर्वाही गर्दछौँ।पाण्डेले आश्वासन दिए जस्तो सजिलो बाहिर थिएन बाहिर केही कुरा जान्न खोज्दा समेत त्यसको सही उत्तर नदिएर रिसाइरहेका बिचौलियाहरु माथि राज्यले कडाई गर्ने कि ? तर सेवाग्राही बाहिर ठगिनेहरुको कुनै कमि नै छैन । यसरी ठगिएका सेवा ग्राहिको गुनासो यस्तो छ भनि प्रश्न गर्दा आफूहरु अनविज्ञ भएको भन्दै पाण्डे पन्छिएका छन् । अब यस्तो समस्या कहिले सम्म भोग्नु पर्ने हो भने कुरामा पाण्डेले भने मन्त्रालयमा यस आसपासमा बैंक राख्नुपप्यो भन्ने आग्रह गरेका छौँ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने बैदेशिक रोजगार विभागमा देखिएको यो विचौलियाको बिगबिगी एकै ठाँउमा बैँक,बिमा तथा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नभएकै कारणले भएको पुष्टि भएको छ ।
दैनिक हजारौँ सेवाग्राही आउने यो वैदेशिक रोजगार विभाग भित्रै बैकिंङ सेवा पुर्याउन सके धेरै बिचौलियाहरुको बिगबिगी स्वतः कम हुने सर्वसाधारणको भनाई रहेको छ । एक दिन थप बस्नुपर्दा थप दुई हजार खर्चहुन्छ सेवाग्राहीले भने बरु विचौलियालार्ई एक हजार दिए काम पनि छिटो हुने रकम पनि जोगिन्छ । यसको लागि सम्पूर्ण सेवाहरु एकैठाँउ बाट उपलब्ध भए विचौलियाको भर पर्नु नपर्ने समेत उनको भनाइ छ । विचौलियको भर पर्दा दैनिक जसो सेवाग्राहीबाट प्रति व्यक्ति एक हजार देखि २ हजार रुपैयाँ सम्म ठगिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसका लागि नियमन गर्ने निकाय किन कानमा तेल हालेर बसेको छ । बेलैमा नियमन तिर लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
शक्ति प्रदर्शन गर्न भनी नदीमा हाम फालेका झाक्रीको निधन